गायिका प्रविशा अधिकारीका श्रीमान अमेरिकामा के गर्छन ? » बुद्ध भूमि नेपाल
चितवनमा आज घटेका चर्चित यी ३ घटना : जो अरु भन्दा फरक थिए
भारतविरुद्ध न्यूजिल्याण्डको उत्कृष्ट सुरुवात, योङ शतक नजिक
प्रदेश-१ को लगातार तेस्रो जित, सोनुको शानदार शतक
६ महिना पछि ओली र देउवाको जम्काभेट, के भनेत एक अर्कालाइ ?
नेपालको लगातार तेस्रो जित, यस्तो बन्यो अंकतालिका
मलेसियाले नेपाललाइ दियो सामान्य लक्ष्य
वैवाहिक समारोहमा दुवै परिवारका सदस्य तथा आफन्तहरुको उपस्थिति रहेको थियो । गायिका प्रविशा अधिकारीले आफ्ना प्रेमी निर्माण सिटौलासँग गत बिहिबार टिकाटालो गरेकी थिइन्। प्रविशासँग विवाह गर्नकै लागि निर्माण केही समय अगाडि अमेरिकाबाट नेपाल आएका हुन्।
प्रविशाले गाएका दर्जन बढी गीतले दर्शकको मन जितिसकेका छन्। निर्माण अमेरिकामा रहेर आईटी क्षेत्रमा सक्रिय छन् ।दुबै जनाको पारिबारिक उपस्थितिमा बिहे कार्यक्रम आयोजना भएको हो । गायक प्रताप दास तथा ‘द भ्वाइस किड्स’का निर्माता सुशील नेपाल प्रविशाको बिहेमा उपस्थित भएका थिए ।
उनिहरु एक बर्षयता सम्बन्धमा थिए ।निर्माण झापा चारपानेका हुन् । चर्चित गायिका गायिका प्रविशा अधिकारी अहिले ‘द भ्वाइस किड्स’की कोच समेत हुन् ।दशैंअघि प्रविशा र निर्माणबीच पहिलो पटक भेट भएको थियो । त्यसअघि उनीहरुको बोलचाल फेसबुकमा मात्र सीमित थियो । फोटो : मुखिया प्रडक्सन
१० मंसिर २०७८, शुक्रबार १७:५७
पेरिसमा नेहा कक्कड र रोहनप्रीत सिंहको लिपलक किस, भाइले दिए यस्तो प्रतिक्रिया (फोटो फिचर)
८ मंसिर २०७८, बुधबार ०८:१८
६ मंसिर २०७८, सोमबार ०८:११
हरेक रात सुत्नुअघि ऐश्वर्या संग माफी माग्थे नायक अभिषेक बच्चन
३ मंसिर २०७८, शुक्रबार २१:५१
१० मंसिर २०७८, शुक्रबार १७:२०
१० मंसिर २०७८, शुक्रबार १६:५८
१० मंसिर २०७८, शुक्रबार १६:३८
१० मंसिर २०७८, शुक्रबार १६:३२
१० मंसिर २०७८, शुक्रबार १५:५५